Fiteny môabita - Wikipedia
Ny fiteny môabita dia fiteny tao Kanaana izay notenena tao Môaba (mifanandrify amin' i Jordania afovoany andrefana) tamin' ny fiandohan' ny taonarivo voalohany tal. J.K. izay isan' ny fiteny semitika. Nosoratana tamin' ny karazana abidy fenisiana (na foinikiana) ny fiteny môabita.
Ny mampiavaka ny fiteny môabita amin' ireo fiteny kanaanita hafa dia ny fampiasana ny marika milaza maro -în fa tsy -îm (ohatra, mlkn "mpanjaka (maro)" andikana ny məlākîm hebreo), ka sahala amin' ny fiteny aramaika (na arameana) sy ny fiteny arabo izany. Ao koa ny fisian' ny mariky ny kambavy hoe -at na -ah fa tsy ny -āh fotsiny ao amin' ny fiteny hebreo (ohatra, qiryat na qiryah, "tanàna", fa tsy qiryāh an' ny fiteny hebreon' ny Baiboly).
Na dia misy fahasamihafana amin' ny fiteny hebreo ny fiteny môabita dia tsy hafa fa ny tarehintsoratra (abidy) nampiasaina tamin' ny fanoratana ny fiteny hebreo ihany no nanoratana ny fiteny môabita tamin' ny fotoana nanombohan' ny fisarahany. Ny manam-pahaizana sasany dia mihevitra fa karazan' ny fiteny hebreon' ny Baiboly ihany ny fiteny môabita, sahala amin' ny fiteny kanaanita maro ao amin' ny vondrom-piteny semitika avaratra andrefana (ny fiteny amônita sy ny fiteny edômita indrindraindrindra).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_môabita&oldid=1012347"
Dernière modification le 13 Jiona 2021, à 10:41
Voaova farany tamin'ny 13 Jiona 2021 amin'ny 10:41 ity pejy ity.